Ogaden News Agency (ONA) – Mucaaridka Congo oo Saluugay Doorashadii Dalka Ka Dhacday.
Mucaaridka Congo oo Saluugay Doorashadii Dalka Ka Dhacday.
Musharraxiinta mucaaradka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa ka cabanaya wax isdaba marin ballaadhan oo ay sheegeen inay hadhaysay doorashadii madaxtinnimo ee shalay ka dhacday dalkaasi.
Dadka codkooda dhiibtay ayaa sheegay in safafku ay aad u dheeraayeen, qaar ka mid ah qalabka codeynta uu shaqeyn waayay, halka roob mahiigaan ah uu ka da’yay qeybo badan oo dalkaasi ah kamid ah.
Dhanka kale rabshado ka dhacay gobolka Koonfurt Kivu ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan laba qof. Madaxweyne Joseph Kabila, oo lagu wado inuu xilka wareejiyo ka dib 17 sano oo uu dalkaasi ka talinayay, ayaa ugu hambalyeeyay shacabka Congo sida nabada iyo sharafta leh ee ay codkooda u dhiibteen.
Balse Felix Tshisekedi oo ka mid ah musharraxiinta mucaaradka ayaa sheegay inuu ka cabsi qabo in rabshadaha dhacay ay ahaayeen kuwo laga soo shaqeeyay, si doorashada loo baajiyo, isla markaana ay taasi u sahasho in xilka uu sii hayo Joseph Kabil.
Caqabada xigta ayaa ah dhamaystirka tirinta codadka iyo soo gudbinta natiijada rasmiga ah, taasoo dhibaato badan dhalisay doorashooyinkii hore ee ka dhacay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. Natiijada hordhaca ah ayaa la filayaa 6-da bisha January 2019.